जब फेसबुकमा लभ: परेर होटलमा भेट्न जाँदा तब केटा उड्यो होस-हवास -बिगुल न्यूज
जब फेसबुकमा लभ: परेर होटलमा भेट्न जाँदा तब केटा उड्यो होस-हवास
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाललाई फेसबुकलाई सदुपयोग गर्न सकियो भने वरदान सावित हुन सक्छ तर यहि चिजलाई खेलवाड गर्दै दुरुपयोग गर्दा निकै ठूलो अभिसाप पनि बन्न बेर लाउँदैन। हामीले फेसुकले कैयौं परिवारको घर जोडिएको पनि देखेका छौँ अनि उजाडिएको पनि।
एउटा यस्तै घटना घटेको छ अरवको कुबेतमा। जहाँ, फेसबुककै एक परिवार उजाडिएको छ। कुवेत निवासी एक व्यक्तिलाई युवतीको फ्रेण्ड रिक्वेस्ट आयो । उनले हत्त न पत्त स्वीकार पनि गरे । दुवैबीच लामो प्रेम वार्तालाप भयो। कुरा हुँदाहुँदा होटलमा भेट्ने तहसम्ममा कुरा पुग्यो ।
प्रकाशित : शनिबार, पुष १५, २०७४११:०५
अध्यादेश पारित भएपछी सरकार छोड्ने बताएको काँग्रेसले अझै सरकार छोड्ने छाँट देखाएन !
चितवनबाट प्रधानमन्त्री देउवाको आयो सत्ता हस्तान्तरणबारे यस्तो प्रतिक्रिया !
बाग्लुङ्गको बुर्तिबाङ्गबाट बादलको उद्घोष केही दिन मै संशोधन प्रस्ताब टुङ्गो लाग्छ
मधेशलाई आधारशिला बनाएर मधेशी मोर्चाले जनबिद्रोह गर्ने
भर्खरै सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्पको धक्का महसुश, स्थानीय त्रसित
सवारी दुर्घटनामा परी दुई जना गम्भिर घाईते